“Mameno Mihoatra Fatra Ny Tsara, Manafina Ny Ratsy”: Ahoana No Handrefesana Ny Fahantrana Sy Ny Fanampiana Ara-tsosialy Ao Ozbekistàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2015 17:14 GMT
Sary Demotix: ID: 198150. Tao Moynaq, Ozbekistàna. 15 Marsa 2013, sary avy amin'i Yan Seiler.
Amin'ny Ozbeka, misy ny fomba fiteny hoe yaxshilikni oshirib, yomonlikni yashirish, izay midika mitovitovy amin'ny hoe “ataovy faran'izay betsaka ny tsara, afeno ny ratsy”. Toa ampiharina tanteraka amin'ny fandrefesana ny fahantrana sy ny fampandrosoana ao Ozbekistàna sy ny faritra Azia Afovoany amin'ny ankapobeny izany fomba fanao izany.
Ao amin'ny haino aman-jery ofisialy ao an-toerana, ampiasaina ihany mba hanondroana ny fotoanan'ny fahasarotana ara-tsosialy sy ara-toekarena niainan'ny repoblika nandritra ny vanim-potoana Sovietika ny teny hoe “fahantrana”. Nihanahazo vahana tsikelikely ny filazana ny olona mahantra ho amin'ny fitenenana ara-politika mety kokoa manao hoe “vondrona marefo amin'ny mponina.”
Iray amin'ireo tanjona valon'ny fampandrosoana napetraka tamin'ny Septambra 2000 tao New York ny famongorana ny fahantrana lalina sy ny hanoanana izay anisan'ny Fanambarana Taonarivo Fahatelon'ny Firenena Mikambana tao New York nosoniavin'ireo firenena mpikambana sy andrim-panjakana mpitari-dalan'ny fampandrosoana. Ity taona ity no manamarika ny faha-15 taona nampiharana ny MDGs. Any amin'ny “fandaharam-potoana [kinendry] aorian'ny 2015″ ny resaka ankehitriny.
“El-yurt tayanchi” (fanohanana ny firenena) tsangambato manome endrika olona ny fianakaviana Ozbek rahampitso ahitana zanakavavy sy zanakalahy navoakan'ny filoha Islam Karimov tamin'ny 2006 tao Karshi, tanandehibe amin'ny faritany notantaniny tamin'ny faramparan'ny taona 1980. Manondro ankolaka amin'ny isan'ny zanaka tokony ananan'ny ankohonana ao anatin'ny taompolo vitsivitsy manomboka izao izany. Sary avy amin'ny mpanoratra [teny anglisy].
Amin'ny ankapobeny, misy ny fitantarana sy fomba fandraisana mifanipaka momba ny fampandrosoana ny maha-olona ao Azia Afovoany. Samy hafa ny tatitra avoakan'ny sampandraharahan'ny fampandrosoana iraisampirenena ao amin'ny faritra. Ny anton'ity fahamaroana ity dia noho ny tsy fisian'ny mangarahahara sy ny tsy fahavononan'ny manampahefana hampiseho tahirinkevitra tena izy amin'ireo fikambanana iraisampirenena misahana ny fampandrosoana mahaolona.
Ohatra, na dia niarahaba an'i Azia Afovoany tamin'ny “fandrosoana haingana amin'ny fampihenana ny hanoanana” aza ny tatitry ny FAO nivoaka farany indrindra tamin'ny 2015, nanamarika ny tatitra iray hafa avy amin'ity fikambanana ity ihany fa manjaka ao amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana ny tsy fisian'ny fitantanana mahomby, ary goavana indrindra izany ao Azia Afovoany sy Afrika afovoany. “
Na dia izany aza, manana endrika vanim-potoana ny fahantrana ao Ozbekistàna, na ara-pamaritana izany na ara-pikajiana. Miovaova arakaraky ny toerana. Ohatra, ratsy tanteraka ny toetrandro 2015 tao amin'ny firenena. Noho ny toetrandro mangatsiaka tsy araka ny tokony izy tamin'ny volana Aprily, nampihena 70% isan-jato ny vokatra azo avy amin'ny hazo fihinamboa ao Ozbekistàna ny fanala.
Ampian'ny zavamisy amin'ny fanondranan'ny firenena voankazo sy legioma 50 taonina any Rosia, tsy mahagaga raha miakatra ny vidin-javatra, mahatonga ireo olona maro tsy manan-tsafidy amin'ny fandaniana na mitahiry izany ao anaty baolina fitaratra mandritra ny ririnina, fomba fanao hatraiza hatraiza ao amin'ny faritra.
Ary efa fantatra fa tsy resahana ankarihary ny fahantrana ao Ozbekistàna. Mety hoe safidin'ny mpampianatra sy ny dokotera kokoa ny mitondra ny sakafo atoandro any ampiasana noho ny mandoa vola ividianana izany ao amin'ny efitra fihinanana an-tsekoly na am-piasana. Mirehareha amin'ny fananana trano na efitranony manokana ny olona saingy hita ry zareo fa miara-mizara izany amin'ny havana izay azonao an-tsaina.
Ny fifamatorana ara-tsosialy matanjaka dia matanjaka sy ny famindrana vola avy any ivelany no nandray anjara mavitrika tamin'ny fanidiana ny fahantrana, saingy tsy naharara azy tanteraka.
Ny tatitry ny UNICEF iray tamin'ny 2009 miresaka fahantran'ny ankizy ao Ozbekistàna no nampiseho fa “ambany dia ambany any amin'ny faritra ambaniivohitra ny fampidirana kilonga any amin'ny akaninjaza manokana (19,2%-n'ny ankizy mitovy taona).”
Ny 20 isanjato ihany amin'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 5 taona no manatrika akaninjaza, tarehimarika izay ambony kokoa talohan'ny fahaleovantena.
Ny olona manana fahasembanana indray no vondron'olona hafa marefo tratran'ny fahantrana ny ankamaroany. Araka ny navoakan'ny UNDP tao Tashkent tamin'ny fomba ofisialy “ny isan'ny olona manana fahasembanana dia 780.000 (2%-n'ny mponina iray manontolo)” ka 52% no vehivavy ary 48% ny lehilahy. Hatramin'ny 70% amin'izy ireo no tsy an'asa, raha farafahakeliny in'efatra avo heny noho ny taha ankapobeny ao amin'ny firenena ny tahan'ny fahantrana amin'ireo olona manana fahasembanana ireo.
Mifangarika ihany koa ny fari-piainana eo amin'ny tanandehibe sy ny any ambanivohitra raha refesina araka ny Gini, izay mandrefy ny fidirambolan'ny maro amin'ny mpanankarena indrindra amin'ny mponina ampitahaina amin'ny an'ny mahantra indrindra, izay tsy azo takarina matetika.
Ambonimbonin'ny tokonan'ny 15% ny tahan'ny fahantrana any Jizzakh, Karakalpakstan, Khorezm, Namangan, Navoi, Surhandarya ary Syrdarya, ohatra, izay mahasolo tena ny mihoatra ny antsasaky ny firenena.
Ny fitomboan-karena angamba no hany zava-boamarika ao an-drenivohitra Tashkent, izay manodidina ny 2% no miaina ambanin'ny tokonan'ny fahantrana ary ao ny manampahefana no manakombom-bava amin'ny mariazy mirentirenty izay mamafy fialonana eo amin'ny fiarahamonina.
Loharanom-baovao: Komitin'ny Antontanisam-panjakana Repoblikan'i Uzbekistan/Firenena Mikambana.
Ny mari-panondroana ny fahantrana lehibe indrindra sy ny tsy fahombiazan'ny fampandrosoana ao Ozbekistàna sy ny firenena Aziatika Afovoany hafa angamba na izany aza dia ny haavon'ny tahan'ny fifindramonina.
Araka ny Servisim-Pifindramonina Rosiana, Ny olompirenen'i Ozbekistàna (2.095.234 – 6.9%-n'ny mponina) no eo antampon'ny lisitry ny Aziatika Afovoany ao amin'ny firenena. Manaraka azy ireo i Tajikistan (1.038.940 – 13%-n'ny mponina), Kazakhstan (693.793 – 4%), Kyrgyzstan (513.917 – 9.1%) ary Turkmenistan (20.225 – 0.36%).
Safidian'ny fampitam-baovam-panjakana ny “manabetsaka indrindra ny tsara” sy mijery matetika ny Tatitry ny Fahasambarana 2015 Manerantany izay mandahatra an'i Ozbekistàna eo amin'ny laharana faha-44 alohan'i Slovakia, Japàna ary Korea Atsimo ary voalohany amin'ireo repoblikan'ny vondrom-piarahamonin'ny Repoblika Mahaleotena (CEI). Saingy raha sambatra tokoa ny olompirenena an-tapitrisany dia tsy maintsy mandeha mifindra any ivelany ve ka mampifaningotra ny hoaviny amin'ny firenena hafa?